ko htike's prosaic collection: သတင်း ကြေငြာခြင်း
Happy New Year In Burma
တိုင်းပြည် ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားခြင်း
ခေတ်မီ ဖွံဖြိုးတိုးတတ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း မသမာ သူများ၏ သွေးထိုး လှုံဆော်မူကြောင့် ဆူပူမှုများ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခု အခါတွင် နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲများ၏ ညွန်ကြားချက်အတိုင် ငြင်ငြင်သာသာ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်၊ တုတ်နဲ့ရိုက်၊ စစ်ကြောရေးပို့၊ ထောင်ချသော နည်းဖြင့် သက်ညှာစွာ ဖြိုခွင်းလိုက်သဖြင့် တိုင်းပြည်သည် နဂိုအတိုင်း ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါသည်။
ယနေ့ည ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကုန်ဆုံးလို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အကူး အခါ သမယတွင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယခင်လို ပုံမှန် အတိုင်း လုံခြုံရေး အစောင့်များဖြင့် စစ်နယ်မြေတစ်ခုလို ထူထူထပ်ထပ်ချပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေပါသည်။ အချို့သော မြို့နယ်များတွင်လည်း ညမထွက်ရ အမိန့်များထုတ်သုံးကာ အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေပါသည်။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးများတွင် ဆူဆူပူပူဖြင့် အရေမရ၊ အဖတ် မရ ည ၁၂ နာရီကို စောင့်မျှော် count down လုပ်ပြီး၊ မီးများ ထိန်ထိန်လင်းအောင် ထွန်းညှိထားသော်လည်း၊ မြန်မာလူမျိုးများက အကျိုးရှိစွာ မီးအမှောင်ချ၍ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြင့် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာ ဦးဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း နှစ်သစ်ကူးည သတင်းအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ၏ နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင်ပင် ဤကဲ့သို့ အကြောက်တရား ကင်းကင်း ရှိပုံနှင့် တိုးတတ်သော အမြင်ရှိပုံကို ကမ္ဘာက အတုယူနိုင်စေဖွယ် သတင်းရေးသား တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
TP MYANMAR STUDENTS ၏ ကြေငြာချက်
Posted by ကိုထိုက် at 05:37
Need to cut with Janta anyway / anytime and anywhere.
Pass this news to all our peoples in Singapore to sack thosed students participate in this events.
2 January 2008 at 04:46
Congratulation TP Myanmar
2 January 2008 at 19:50
美女短片免費試看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天視訊錄影美女視訊聊天室免費辣妹視訊聊天網網友情聊天室上班族偷情聊天室已婚上班族聊天室080心悸動聊天室美眉影音視訊聊天室夜未眠成人影城☆♀ 18成人 ☆♀免費下載成人短片免費真人視訊辣妹一對多視訊聊天即時視訊聊天網路視訊聊天臺灣18歲成人小弟弟成人娛樂小潘潘成人無碼片夜激情成人聊天室免費視訊美女網成人愛情交易所線上交友網百分百成人圖日本av女優影片無碼av女優女優寫真av女優介紹sex女優王國免費a片觀看線上aa片免費看免費線上a片免費A片線上下載情人視訊聊天室情色 後宮電影院SEX情色免費AV女優-線上視訊女優天堂AV女優-無碼A片女優王國情色遊戲女優色情自拍女優王國線上a電影直播女優探索網免費色倩短片觀賞色美媚部落格嘟嘟免費試看短片aa 片試看激凸成人論壇綜合論壇台灣情色網小老鼠米克情色網震撼情色論壇櫻桃不夜城亞洲情色風暴論壇歐美女優台灣情色咆嘯論壇kk69視訊俱樂部免費漫畫帝國洪爺sex520貼片小弟弟貼影片區美美色網貼片區一葉晴貼影片Show-LIVE影音視訊成人電影下載Ａ片免費a片網站Ａ片,免費a片網站女優網免費線上a電影免費性短片欣賞免費a片網站免費色情a片天堂免費A影片直播kk69視訊俱樂部免費情色影片觀賞免費情色電影夢幻情緣聊天室